Sithini isicwangciso sakho sokuBuyisa abaThengi? | Martech Zone
NgoLwesibini, Aprili 7, 2009 NgoMvulo, Februwari 8, 2016 Douglas Karr
Kwizithuba ezininzi endikhe ndathetha ngazo “Fumana, gcina kwaye ukhule” izicwangciso zeenkampani zokukhulisa ishishini labo, kodwa inye into endicinga ukuba andikhe ndibhale ngayo yile ku hlaziya abathengi. Kuba ndikumzi mveliso wesoftware, kunqabile ukuba ndibone abathengi bebuya ngoko ke asibandakanyanga amaqhinga ukuzama ukubuyisa umthengi. Oko akutsho ukuba ayifanele yenziwe, nangona kunjalo.
Ndikwinkomfa yeWebTrends Engage kunye ne-CEO u-Alex Yoder baxoxe ngeendlela zokufumana kwakhona njengesicwangciso sesine. Isibhengezo seWebTrends sokuba nobambiswano neRadian6 yalatha kwisicwangciso esiliqili sokubuyisela kwimeko yesiqhelo - hayi nje amandla okuphulaphula oko kuthethwa ngabathengi, kodwa kukuhamba komsebenzi okwenzekayo ukunika imisebenzi kunye nokubeka phambili imithombo yeendaba zentlalo (ngempembelelo).
Siphila ngexabiso eliphantsi, umhlaba onomthamo omkhulu kwaye iinkampani zinobunzima bokulawula inani elikhulu labathengi abasasazeke kwiindawo ezininzi ezingenakubalwa. Ezi nkqubo yindlela efanelekileyo yokunxibelelana ngokufanelekileyo nabathengi bakho, ukulawula igama lakho kunye nokufumana amathemba.
Ngamanye amagama, xa zidityanisiwe, amaqonga avumela inkampani ukuba ingayigcini nje ngokuba lixesha lokwenyani, kodwa isabele kwangoko kwincoko. Olu luphumeleleyo kubathengi nakwiinkampani… abathengi banokunyusa inethiwekhi kunye nolwalamano ukwenza iinkampani zibamamele, hayi ukufihla ngasemva kwenombolo eyi-1-800 enezinto ezingapheliyo zokuhambisa umthengi onomsindo elityalwe.
Ukuvavanya indlela yokusebenza, mna tweeted malunga neWebTrends ngexesha lokwenziwa kunye neWebTrends kaJascha Kaykas-Wolff undifumene kubaphulaphuli ngexesha le-Keynote kwaye wandibonisa ukukhankanywa kwi-Twitter kwi-iPhone yakhe. Izinto ezipholileyo! IWebTrends ikwabhengeze iTshintshiselwano oluVulekileyo- iqonga labo ledatha evulekileyo ebonelela abathengi ngokufikelela simahla kwidatha yabo nge-API. Njengoko babeka, "Yidatha yakho, akufuneki uhlawuliswe ngayo!" (Amen!). Baye basungula uthungelwano lwabo lophuhliso.
Abanye banokuba nexhala njengesixa sedatha aqokelela amashishini malunga nabathengi. UAlex wakhankanya enye yeenkampani athenga kuzo kwaye baneenkcukacha ezingaphezulu kwama-2,000 XNUMX malunga naye. Andinaxhala lokuba zingakanani iinkampani ezaziyo ngam… ndixhalabile ngakumbi nokuba bayayisebenzisa okanye abayisebenzisi loo nkcukacha ukundiphatha bhetele!
Ngaba unaso isicwangciso sokubuyisela kwimeko yesiqhelo kubathengi abemkileyo? Kubonakala ngathi umntu osele eyazi imveliso yakho, inkampani yakho, njl.njl. Angangumthengi omkhulu ukuba abuyele… kwaye isenokuba yindleko encinci ekufumaneni umthengi omtsha ngokupheleleyo. Ukuba ngumbutho weshishini, unokufuna ukujonga umboniso weRadian6 kwaye ujonge nzulu kweyakho kubahlalutyi indibaniselwano ukumisela ukuba iyazifezekisa na iimfuno zakho.
tags: alex yoderukubuyiswa kwabathengiukugcinwa kwabathengiUJascha Kaykas-Wolffwndebguwin umva abathengi
Ulawulo lwegama neRadian6
Epreli 7, 2009 ngo-3: 09 PM
Ndinqwenela ukuba bendikulo msitho, ke enkosi ngesishwankathelo senqaku eliphambili kunye nokubhala malunga nesibhengezo sobambiswano seWebTrends / Radian6.
Ndiyayithanda imbono yakho kuyo njengoko inika iinkampani ithuba elininzi lokuphucula iinkonzo zabathengi kwaye umamele ngcono abathengi bazo, "ungazifihli nje emva kwenombolo ye-1-800" njengoko usitsho.
Iinkampani zinethuba lokuba nobuntu ngakumbi, ukuphendula, kunye nokwakha ukulingana kubathengi nabathengi ngeendlela ezintsha ngokuphulaphula kunye nokuphendula kwi-Intanethi.
Epreli 7, 2009 ngo-3: 45 PM
Enkosi kakhulu ngokuba nathi xa usenza inxaxheba. Nangona uthumele i-tweet ngokungxama, andicingi ukuba iposti yakho imele nantoni na eluhlobo.
Ndichithe uninzi lomsebenzi wam kwisoftware / kwintengiso kwaye ndiza kuthi isicwangciso sokubuyisa umthengi sibalulekile kwimpumelelo yexesha elide. Nokuba ziphi na iimveliso ozithengisayo, olona phawu lwentengiso ekhokelayo yindlela abaphatha ngayo abathengi xa kukho into engahambi kakuhle. Kuyinyani kuthi nakwisoftware.
Kwiposti yakho ubuchazile ukuba ndikufumene kwaye ndikubonise i-tweet yakho kwi-iphone yam. Kwakungxola, ke andizukucacisa lonke ibali. Into endikubonise yona yayililiso lexesha lokwenyani elithunyelwe kum Imilinganiselo yeWebtrends yoLuntu exhaswa yiRadian6. Sisebenzisa isixhobo kwiqela lam namhlanje kwaye siyayithanda; Iqela leRadian6 liyamangalisa ukusebenza nalo.
Ndivele nje ndakwazi ukuza ndize ndathi molo endaweni yokwenza ngokwamanani :)